« Velona Marina i Kristy: miara-misakafo, mifampizara ny manta sy ny masaka, amin’ny mpianany Izy » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Paka 03B
Asa 3, 13-15. 17-19; 1 Jn. 2, 1-5a ; Lk. 24, 35-48
Alahady fahatelo fankalazana ny Paka. Alahady fanohizana ny fibanjinana an’i Jesoa Kristy nitsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianany, nankahery sy nanamafy ny finoan’izy ireo fa i Jesoa avy any Nazareta tokoa, ilay maty teo ambony hazofijalina, no Kristy velona marina tokoa. Nombanjinina tamin’ny alahady faharoan’ny Paka ny fisehoan’i Jesoa teo anivon’ny mpianatra tafavory indray ny harivan’ny Paka. Fa nobanjinina manokana tanatin’izany fivorian’ny mpianatra izany ny nisehoan’i Jesoa indray, afaka herinandron’ny Paka, ka nankaherezany sy nanamafisany ny finoan’i Tomà.
Mbola ny fisehoan’i Jesoa tamin’ireo mpianany tafavory ihany no tantarain’ny evanjely androany. Tsy mora tamin’ireto mpianatra ireto no nino fa Velona marina ny Tompo. Tsikelikely, tamin’ny alalan’ny teny sy ny fihetsika, no nitarihan’i Jesoa azy ireo hino sy hatoky.
« Notantarain’ny mpianatra avy tany Emaosy tamin’ny Apostoly iraika ambin’ny folo lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho tamin’izy ireo teny an-dalana sy ny nahafantaran’izy ireo an’i Jesoa tamin’ny famakiana ny mofo ». Asongadin’ny evanjely àry aloha ilay fotoana mamy nifampizaran’ireo mpianatra avy any Emaosy ny niainan’izy ireo ny zava-nitranga tamin’ilay marainan’ny herinandro voalohany iny sy ny nisehoan’i Jesoa tamin’izy ireo ny takarivan’io andro voalohany io. Tsy honohono intsony fa nahita an’i Jesoa Velona izy ireo. Niara-dalana Taminy, nampiantrano Azy ary niara-nihinana Taminy ; nihinana ilay sakafo Eokaristika, mofo novakin’i Jesoa. Nampiova ny fon’izy ireo izany. Nanamafy indray ny finoana. Nampitsimoka ny fanantenana. Nampiredareda ny fitiavana. Teo am-pizarana izany vaovao mahafaly izany indrindra anefa izy ireo no niseho teo afovoan’izy rehetra indray i Jesoa.
« Homba anareo anie ny fiadanana ! Aza matahotra, fa Izaho ihany... Nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no mihanahana ao am-ponareo ? ». Mbola tao anatin’ny fahatairana sy tahotra no nandraisan’ny mpianatra izany fisehoana izany. Fahatairana sy tahotra niteraka tebiteby. Nihanahana fotsiny izy ireo. Nisy aza nihevitra ho nahita matoatoa. Vao teo anefa no nifampiresaka fa efa nisy nahita ny Tompo Velona... Ratra mafy ho an’ireto mpianatra ireto ny fijaliana sy ny fahafatesan’i Jesoa hany ka nahavery hevitra azy ireo koa ny nahita Azy tafatsangan-ko velona indray.
« Zahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho mihitsy ity: tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mana-nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo Ahy izao ». Manoloana izany fisalasalan’ny mpianatra izany dia nataon’i Jesoa hatrany izay hampahazo toky azy ireo. Nasainy hijery sy hitsapa, toy ny nataony tamin’i Tomà, izy ireo. Tonga ho hafaliana sy talanjona àry ny tebiteby sy ahiahin’izy ireo, kanefa mbola sarotra ho azy ireo ny hino fa ny Tompo tokoa io.
« Moa manan-kanina eto va ianareo ? ». Fomba hafa indray no nentin’i Jesoa nampahazo toky azy ireo. Nisakafo teo imason’izy ireo Izy... Tapa-kazandrano voatono no natolotra azy ka noraisiny sy nohaniny. Tantely mamy, fitahiry sy fampiasa, teo amin’ny fiangonana sasany tany am-piandohana, amin’ny fanaovana batemy no natolotr’izy ireo ihany koa. Velona tokoa Izy. Velona marina i Kristy. Miara-mihinana ny manta sy ny masaka amin’ny mpianany. Nohosorana tantely fa vahiny vao, tonga mamangy.
« Tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba Ahy ao amin’ny Lalànan’i Moizy sy ny Mpaminany ary ny Salamo ». Dingana manaraka nentin’i Jesoa nampahazo toky ny mpianany ny fanazavany ny momba Azy miainga avy amin’ny Soratra Masina. Ireo boky rehetra, misy antokony telo, ao amin’ny Testamenta Taloha : ny Lalànan’i Moizy na boky dimin’i Moizy ; ny Mpaminany na ny bokin’ny Tantara sy ny mpaminany ; ny Salamo na ny bokim-pahendrena, dia samy manambara ny Kristy avokoa. Tsy Kristy araka ny fiheveran’ny olona anefa fa Kristy tsy maintsy handalo fijaliana sy fahafatesana fa hitsangan-ko velona kosa amin’ny andro fahatelo.
Jesoa Tompo ô ! Santatry ny fiainam-piangonana ankehitriny ny nisehoanao tafatsangan-ko velona tamin’ireo mpianatra tafavory. Eo afovoan’ny Fiangonana hatrany Ianao isaky ny mivory ny Kristianina mba hifampizara ny manta sy ny masaka ao amin’ny Eokaristia sy ny Tenin’Andriamanitra. Avia ry Jesoa Tompo ô ! Tongava eo anivonay. Tongava eo anivon’ny vahoakanao !
Ry Olontsambatra Ramose Lucien Botovasoa ô ! Mivava ho anay